I-Franchise Yezezimali - AmaFranchise Wezezimali | Franchiseek
Izikhungo Zezimali Zezimali
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izikhungo Zezimali Zezimali
Okufakiwe Kwezimali Zezimali
Ama-Franchise wezezimali akamuva
Ngokwanda kwabantu abaqhuba amabhizinisi abo kuye kwaba nokwenyuka kwezinsizakalo zezezimali ezinjengokwehliswa kwezindleko, ukubolekwa kwemali nezinsizakalo zokubalwa kwezimali. Ngesidingo esandayo salezi zinsizakalo lokhu kungakhombisa ukuthi manje sekuyisikhathi sokutshala imali kwinqubomgomo yezimali.
Iziphi izinhlobo zamasheya wezezimali akhona?
Njengokuhlu okungenhla kunezindlela eziningi zokukhetha ezahlukahlukene ezizungeze yonke imikhakha yamasevisi wezezimali njengensizakalo yemalimboleko ngokwesibonelo sinikeza amafranchise amaningi ahlukene kuyo yonke le mikhakha esesigabeni sama-Franchise wezezimali. Ngakho-ke uma ufuna noma yiliphi ithuba emkhakheni wezezimali emhlabeni jikelele kepha ungaqiniseki ukuthi iyiphi imboni ongathanda ukuzibandakanya kuyo ngincoma kakhulu ukuthi kufundwe ngesiqondisi sethu.
Izibalo ezungeze umkhakha webhizinisi.
Lezi zibalo zizokhombisa ukuthi bangaki osomabhizinisi abeza nabamabhizinisi abo kulezi zinsuku emhlabeni jikelele. Futhi lokhu kuzokunikeza ukuqonda okuncane kuhlobo lwemakethe onalo ngokutshala imali kwinhlangano yezimali. Ngoba kuzoba nesidingo esikhulayo sezinsizakalo zezezimali zosomabhizinisi abasasa.
Bangu-582 million osomabhizinisi emhlabeni.
EBrazil ama-53% osomabhizinisi njengamanje basebenza bodwa.
Inani eliphakeme kakhulu labasebenzi abazisebenzelayo (19.6%) basebenza emkhakheni wezokwakha / wezohwebo.
I-83.1% yabanikazi bamabhizinisi baseMelika baqala izinkampani zabo.
Ama-22.5% amabhizinisi amancane ahluleka ngonyaka wokuqala.
Ngabe lezi zibalo zibonisa ini emkhakheni wezinsizakalo zezezimali?
Sekukonke lezi zibalo zikhombisa isisekelo samakhasimende esikhulu futhi kukhombisa ukuthi iningi labantu lisebenza ibhizinisi lonke lodwa okusho ukuthi bangadinga usizo olwengeziwe lwezinsizakalo ezinjengokubalwa kwezimali noma ukubolekwa kwemali ngokuzayo. Ekuphetheni lezi zibalo zikhombisa isisekelo esikhulu samakhasimende kanye nomhlaba owanda njalo wamathuba njengoba manje abantu abaningi sebeqala ukusebenza futhi bezama ukuqhuba amabhizinisi abo.
Isiphetho esizungeze imboni yezimali.
Ikakhulu abantu abaqhuba amabhizinisi abo bakhombisa ukuthambekela okukhulu nokushintsha izindlela esisebenza nezenza ngayo izinto esizukulwaneni sanamuhla. Kepha lokhu kusho ukuthi abantu abaningi bazodinga usizo lwezezimali njengokuncishiswa kwezindleko noma ukubalwa kwezimali ukusiza ibhizinisi labo ukuthi likhule kakhulu. Ngakho-ke, ekuphetheni ngingasho ukuthi imboni yezinsizakalo zezezimali iyimodeli yebhizinisi eqinile uma iqhutshwa kahle futhi ikhombisa izimpawu ezinhle zokwanda kweminyaka ezayo.